Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
2018-03-07 12:13:59 6
UXian shang eJinzhong City, eShanxi Province
Esikhathini esincane esedlule, zikhathi zonke uma ngizwa ukuthi abashumayeli besifunda beza ebandleni lethu, ngangiye ngizizwe ngingakhululekile kahle. Angizange ngiyiveze imizwa yami ngaphandle, kodwa enhliziyweni yami kwakugcwele ukungqubuzana okufihlakele. Ngangiye ngicacabange: “Kungakuhle uma ningezi nonke. Uma kwenzeka niza, okungenani ningasebenzi nami ebandleni. Uma kungenjalo, ngizobindeka ngingakwazi ukuxoxa.” Kamuva, isimo saba sibi kangangokuthi eqinisweni ngaze ngazonda ukuza kwabo. Noma kunjalo, bengingacabangi ukuthi kukhona utho olwalungalungile ngami kanti futhi angizamanga ukuzazi engqikithini yalesi simo.
Kwaze kwathi ngolunye usuku, ngafunda isiqeshana esilandelayo ezwini likaNkulunkulu: “Imfundiso yobugqila nokudlulisa ulwazi lwamasiko asendulo kumthonye kakhulu umuntu, abantu baphenduka odeveli abakhulu nabancane. … Ubuso bomuntu bugcwele ukubulala, futhi kuzo zonke izindawo, ukufa kusabalele. Bafuna ukugudluza uNkulunkulu ezweni…. Ufisa ukumwisa ngegalelo elilodwa uNkulunkulu, amthele ngechilo futhi amqothule, uzama ukucekela phansi nokuphazamisa umsebenzi Wakhe. Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba abe “sezingeni elifanayo”? Angakubekezelela kanjani “ukugxambukela” kukaNkulunkulu emsebenzini wakhe kubantu emhlabeni? Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba amembule ubuso bakhe obubi? Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba aphazamise umsebenzi wakhe? Lo develi, uvutha bhé intukuthelo, angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba engamele amandla akhe emhlabeni? Angawucela kanjani umaluju? Ozakwabo bembuliwe ukuthi bangobani, futhi umuntu akazi nokuthi kufanele ahleke noma akhale yini, yinto okunzima ngampela ukukhuluma ngayo. Ingabe lesi akusona isiqu sakhe? … Amademoni nemimoya emibi … kuvimbe intando kanye nemizamo kaNkulunkulu, kwenza izinto zaba nzima. Yisono esikhulu leso! Angahlala kanjani angakhathazeki uNkulunkulu? Angahlala kanjani engabi nolaka uNkulunkulu? Awuphazamisa kakhulu futhi amelene nomsebenzi kaNkulunkulu. Izihlubuki ezinkulu!” (“Umsebenzi Nokungena (7)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngacabanga ngencazelo yalesi siqeshana lapho ngizindla ngesimo sami sakamuva nje: Kungani kube sengathi ngangingazithandi izisebenzi zesifunda ukuba zize ebandleni lethu? Kungani ngangingazimisele ukuzivumela ukuba zisebenze kanye nami ebandleni? Ingabe kwakungekhona ukuthi ngangikhathazwa ukuthi uma zazingeza ebandleni, zazizobona ukuthi angisebenzi ngokwesimiso noma ngokwentando kaNkulunkulu nokuthi zazingabhekana nami ngale ndaba? Okunye, ingabe ngangingesabi ukuthi ukuza kwazo kungahle kungidonsele amanzi ngomsele ezinhlelweni zami zokusebenza? Ingabe ngangingesabi ukuthi zizokhuluma kangcono kunami zingenze ngilahlekelwe isikhundla ezinhliziyweni zabafowethu nodadewethu? Uma zazingezanga, ngangingaqhubeka ngezinhlelo zomsebenzi wami ngendlela engithanda ngayo. Noma ngabe izindlela zami zazingahambelani nesimiso sentando kaNkulunkulu, akekho owayengazi futhi akekho owayengabhekana nami noma angigxeke. Ngale ndlela, isimo sami ezinhliziyweni zabafowethu nodadewethu sasizodlondlobala, sibe namagunya futhi sizinze kakhulu. Bonke abazalwane bebandla babezobheka kimina, bangithande futhi balalele nemiyalo yami. Ibandla lonke lalingezwa mina ngedwa. Ingabe lokhu kwakungeyona inhloso yami yeqiniso? Ingabe ngangingahleli ukukhipha uNkulunkulu ezinhliziyweni zabafowethu nodadewethu ukuze ngizuze isikhundla ezinhliziyweni zabo? Ingabe ngangingesona isibonelo esiphilayo nesiphefumulayo salobo buthi bukadrako omkhulu obomvu, “Umbusi ukude le njengesibhakabhaka,” “Akunankosi ngaphandle kwami?” Ukuze alawule futhi abuse phezu kwabantu, udrako omkhulu obomvu walwa nokuza kukaNkulunkulu ngamandla amakhulu, wangavuma ukuba uNkulunkulu abe nesandla ezindabeni zabantu, ukudalula ubuso bakhe obunonya, ukuphazamisa amasu akhe noma ukubusa endaweni yakhe. Ngalokho, waphikisa, waphazamisa kakhulu, wadilizela phansi futhi wahlikiza umsebenzi kaNkulunkulu. Okwakusemqondweni wakhe ukuthi, ngolunye usuku, wayengahlwitha uNkulunkulu ezinhliziyweni zesintu afeze inhloso yakhe enyanyekayo yokuba umlamuli wabantu phakade nokuphoqa isintu ukuba simdumise. Imuphi umehluko owawukhona phakathi kwemicabango yami nezenzo zikadrako omkhulu obomvu? Ngenxa yokuthi ngangifuna ukugcina isikhundla sami nokuziqinisekisa ukuthi ngangingahamba ngendlela yami ngingavinjelwa muntu emsebenzini wami, ngangingafuni ukuvumela abanye abaholi noma izisebenzi zibheke noma zihlole umsebenzi wami. Ngangingafuni noma ubani ukuba aphazamise umsebenzi webandla lami noma anisele abafowethu nodadewethu. Kungani ngangingakufuni lokhu? Kwakungekhona ukuthi nje ngangifuna ukulawula nokubusa phezu kwabanye? Ingabe ukulangazelela kwami kokugcina kwakungekhona ukuzazisa njengenkosi nombusi wasemhlabeni phezu kwabafowethu nodadewethu? Ngabona ukuthi ubuthi bukadrako omkhulu obomvu—lokho kuziqhenya okungahlosiwe nokuzikhohlisa ukuthi unodumo—base buvele bangena ekujuleni kobunjalo bami. Ithonya likadrako omkhulu obomvu lase likade langingena: ngase ngaba yidimoni elinenhliziyo embi njengodrako uqobo lwakhe. Emehlweni, ngangisebenzela ukufeza umsebenzi wami, kodwa inhliziyo yami yayinezizathu ezisithekile. Empeleni, ngangifuna ukubhidliza isihlalo sobukhosi, ngidale ukudideka kuyo yonke indawo futhi ngizimisele owami umbuso ophikisana noNkulunkulu novimbela ukwenziwa kwentando kaNkulunkulu. Imvelo yami yayiwububi boqobo futhi yethusa kakhulu! Ukuba akubanga ngesambulo nokwahlulelwa okunzima yizwi likaNkulunkulu, ngangingeke ngazi ukuthi ngase ngikuliphi izinga lokukhohlakaliswa uSathane nokuphikisa uNkulunkulu. Ngangingeke ngibone ukuthi, ekujuleni komphefumulo wami, kwase kwakhiwe icebo lobugwala nokuthi isimo sami semvelo sasesihlushwe kakhulu ububi.
Ngiyabonga Nkulunkulu ngezambulo Zakho nangokukhanyiselwa, okwangivumela ukuthi ngibone isimo sami sobusathane sokuzidla nokunyanyeka. Ngiyabona ukuthi, eqinisweni ngingumntwana kadrako omkhulu obomvu nowengelosi enkulu. Nkulunkulu, ngiyafunga ukuthi ngizofuna iqiniso ngenkuthalo ngize ngifike ekuqondeni okunzulu kokuthi ubuthi bukadrako omkhulu obomvu busizwisa kanjani isimo sami semvelo ubuhlungu. Ngiyafunga, ikakhulu, ukwamukela ukuhlolwa nokubhekwa ngezinye izisebenzi nabaholi. Ngizokwamukela ukubhekana nokuthenwa kwakho konke. Ngizozibeka ngaphansi kokuhlolwa yibandla lonke ukuze ngifeze umsebenzi wami ngenhliziyo emhlophe ukuze ngithokozise inhliziyo Yakho.
Okwedlule： Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?
Okulandelayo： Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni